Iyi inogona kuve iyo iPhone 6c kana yakavhurwa munaGunyana | IPhone nhau
Mwedzi mishoma yapfuura pakanga paine runyerekupe rwakasimba rwekuti Apple yaizovhura iPhone 6c, iyo yaizosvika iine 4 inch screen, polycarbonate kumashure yakawanda-mavara senge iPhone 5c uye iphone 6 moyoAsi runyerekupe rwazvino, rwakavakirwa paongorori mishumo, ramba mukana uyu.
Kune avo vese vaishuwira kuziva kuti iPhone 6c yaizove nemufananidzo upi, Seta Solution yakagadzira vhidhiyo matinogona kuona mashanu maPhones ane mashanu akasiyana mavara. Iwo mavara akasarudzwa akawedzera kana mashoma iwo atinogona kuona muiyo iPhone 5c, uye ini ndoti zvakati kana zvishoma nekuti muvhidhiyo hamuna chena modhi uye pane yeorenji modhi, kungofanana nepinki ine yakawanda pinkish ruvara, kune Kusiyana iyo yatinogona kuona muApple Chitoro iyo inoita senge muchinjikwa pakati pingi nepepuru.
Iyo iPhone 6c yeSet Solution inopenya zvakanyanya kupfuura iyo yazvino 5c, chimwe chinhu chandisingazive kana chingave chinogoneka mune zvakafanana zvinyorwa seizvo zviri pamutemo izvo. Pamusoro pezvo, hazviite zvine musoro kusiya mitsetse michena yakafanana neiyo iPhone 6. Hazvina musoro nekuti mitsetse iyoyo inogadzirwa nerabha kunzvenga matambudziko nemaantena, dambudziko rinongowoneka kana musana uri wese simbi. Kuve kweimwe yepurasitiki zvinhu, mitsetse haina kudikanwa. Zvakare, wadii kuvasiya vasina kana vachigona kugadzirwa muvara rimwe chete nedzimwe nyaya dzacho?
Kunyangwe iro basa reSet Solution richiita serakanaka kwandiri, ivo vasiya tsananguro yandinofungawo kuti yaisakwanisa kusvika kune iPhone 6c: iyo ukobvu. Sezvo isu tichiona nekuenzanisa iyo iPhone 5s neiyo iPhone 5c, yechipiri yakanyanya kukora kupfuura yekutanga, chimwe chinhu chinoita senge chisingaitike neiyo iPhone 6c. Zvisinei, tinokusiya uine vhidhiyo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone Concepts » Iyi inogona kuve iyo iPhone 6c kana yakavhurwa munaGunyana
G Armando Rojas akadaro
Handiti amai Apple nei? uye ini ndine nzvimbo grey
Pindura kuna G Armando Rojas
kana iyo 6 yakashata kubva kumashure, yatove yakagadzirwa nepurasitiki uye ine mavara inoita kuti iwe ude kurutsa!
Alejandria Santiago Villa Chaiyo akadaro
Pindura kuna Alejandria Santiago Villa Chaiyo
Junior Ortiz Cabrera akadaro
Saka kana akakanda iyo 6c, vanoenderera mberi here nechitanhatu sezvakaitika ne6?
Pindura Junior Ortiz Cabrera
Carlos Aleman Uribe akadaro
Pindura kuna Carlos Aleman Uribe
Cintya gonzalez akadaro
Ndinoda mwana mumwe chete: 3
Pindura Cintya González
Uvaxe Miguel akadaro
Pindura Uvaxe Miguel
Lissy PL akadaro
zvirinani zvinopesana kupfuura 5c
Pindura kuna Lissy PL
Wozniak anotsanangura mutsauko mukuru pakati paSteve Jobs naBill Gates